XBian Alpha4| Saturngod
XBian Alpha 4
2 Replies XBian alpha4ကို December 31 က release လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ weekend မှာ တင်ပြီး update လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ XBian alpha4မှာ XBMC 12 Frodo ကို အသုံးပြုထားလို့ ကျွန်တော် သုံးနေကျ Quartz Skin ကို အသုံးပြုလို့ မရတော့ပါဘူး။ Default Confluence skin ကို သာ လက်ရှိ အသုံးပြုနေရတယ်။
XBian alpha4မှာ Windows အတွက် Installer ကို ထုတ်ထားပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် Windows သမားတွေ လွယ်လွယ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Linux နဲ့ Mac သမားတွေကတော့ Terminal ကနေ SD card format ချ ။ dd နဲ့ ပြန်ပြီး img file ကို SD card ပေါ်တင် စတာတွေတော့ လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။
XBian alpha4မှာ ssh ကနေ update လုပ်လိုက်ရင် XBMC ပျောက်သွားမယ်။ SSH ကိုတော့ ချိတ်လို့ရသေးတယ်။ သို့ပေမယ့် XBMC မတက်လာတော့ဘူး။ ssh ကနေ apt-get update , apt-get upgrade လုပ်ပြီးသွားရင်တော့
အဲဒီ အတိုင်း လုပ်ပေးလိုက်ရင်တော့ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။
Alpha4မှာ air play ကို ပြန်ပြီး အသုံးပြုလို့ရပါပြီ။ အိမ်က router လဲပြီးတော့ air play ကို စမ်းကြည့်တာ alpha3မှာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် bug fix လုပ်ပြီး စမ်းကြည့်တော့ ရပါတယ်။ air play အလုပ် လုပ်မလုပ်က router နဲ့ ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Air play ကိုတော့ XBMC က Setting မှာ on ထားပေးဖို့​တော့ လိုပါတယ်။
Samba ကို တင်ပြီးတော့ raspberry pi ကနေ network drive လုပ်ထားလို့ရတယ်။ Samba ကို ဘယ်လိုသွင်းရမလဲဆိုတော့ နောက်တော့ ကျွန်တော် ရေးပေးပါမယ်။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in Knowledgebase and tagged raspberry, xbian on January 7, 2013 by saturngod. Post navigation
What can you really do withaRaspberry Pi ? →
2 thoughts on “XBian Alpha 4” maunghtike January 31, 2013 at 8:27 pm http://www.mediafire.com/?6wodgmczyhg ဒီလင့် ကသေနေလို့ဆော့ ဝဲလေးအသစ်တင်ပေးပါအကိုရေကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒီထက်မကအစ်ကိုအောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်
Reply ↓ saturngod Post authorJanuary 31, 2013 at 9:15 pm what is the file name ? I can’t check your mediafire link Reply ↓ LeaveaReply Cancel reply
ကိုယ့်တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင်တော့ မလုပ်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို တိုးတက်အောင်တော့ ကြိုးစားနိုင်တယ်။ — saturngod Job Vacancy From MZ ForumWe want JAVA Programmer !!!!Seeking volunteers forawordpress.com blogSenior ProgrammerOpen source senior programmer and Project Manager post at Tbit SolutionJOB OPPORTUNITYFreelance to write the project with Java springService Technician (၁) ဦးအလိုရှိသည်IT AdministratorPHP Web Developer (Urgently)Senior Web Front-End Developer ၃ ဦးFacebook Tweets by @saturngod